Qhagamshelana nathi - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Idilesi: I-999 Fushan Road, iXiaolan yeNdawo yezoQoqosho, Isixeko saseNanchang, Jiangxi 330200, PR China
NgoMvulo-ngeCawa: iiyure ezingama-24 kwi-Intanethi
Umvelisi oyingcali kuphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yezixhobo zonyango. Yinkampani ephethwe ngu-Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (isifinyezo: iSanxin Medical, ikhowudi yesitokhwe: 300453), kunye neYunnan Sanxin esekwe kwiYunnan iya kunceda ekuphuhliseni icandelo lezonyango lwasekhaya kunye neenkonzo zonyango; kwangaxeshanye, izakwenza umsebenzi olungileyo njenge "bhloko yebhulorho" yolwakhiwo lweSanxin Medical kumazantsi-ntshona, ikhupha iAsia yoMzantsi noMzantsi mpuma weAsia. Inkampani ibekwe kwindawo yaseKirin ye-Anning Industrial Park, kwisiXeko saseKunming, kwiPhondo laseYunnan, nenendawo engaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-60,000; ikakhulu ivelisa ezilahlwayo isiphelo sokumiliselwa kuthotho oluphezulu kunye neemveliso zothotho lokuhlanjululwa kwegazi.
Lishishini lesizwe eliphezulu-lobuchwephesha eligxile kuphando nakuphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkxaso yezobuchwephesha kuthotho lwehemodialysis yezixhobo zonyango. Umboneleli ngezixhobo eziphambili zehemodialysis kunye nezisombululo.
Yasekwa ngo-Agasti ka-2018, ngemali eyinkunzi ebhalisiweyo ye-yuan yezigidi ezili-12, igxile ekunikezeleni ukugcinwa, ukusasazwa, ukulawulwa kwempahla kunye nezinye iinkonzo zokwenza izixhobo zonyango kunye neenkampani ezisebenzayo. Inkampani ibekwe kwindawo yesizwe yeXiaolan yezoQoqosho noPhuhliso lweTekhnoloji kwaye yinkampani ephethwe ngokupheleleyo yiJiangxi Sanxin Medical Technology Co, Ltd. (ikhowudi yesitokhwe: 300453).
Le nkampani ikakhulu benza uphando nophuhliso, imveliso kunye nolawulo lwezixhobo zonyango; ushishino lokungenisa elizweni izinto ezingafunekiyo kunye nezinto ezincedisayo, izixhobo zoomatshini, izixhobo zokusebenza, izixhobo ezizezinye kunye neetekhnoloji ezinxulumene noko ezifunekayo kwimveliso kunye nophando lwenzululwazi lwenkampani, kunye nokulungiswa kwezinto zangaphandle zenkampani.
I-Ningbo Filal Medical Products Co., Ltd.yishishini eligxile kwi-R & D, kwimveliso kunye nasekuthengisweni kweemveliso zotyando lwe-cardiothoracic. Ivelisa izihluzo zegazi ezilahliweyo, izihluzo zegazi ezilahlwayo kunye nemiphunga yentliziyo eyenziweyo. Iphakheji yokujikeleza kwamaphepha angaphandle (ityhubhu yokujikeleza kwangaphandle), izixhobo ezilahlwayo ezibandayo zokutshiza i-cardioplegia kunye nezinye iimveliso zithengiswa kwizibhedlele ezinkulu kwilizwe liphela, kwaye zisetyenziswe eklinikhi kwizibhedlele ezingaphezulu kwama-300, kwaye zonke ziye zafumana iziphumo ezingathandekiyo. Umgangatho wemveliso uphakathi kwezona zilungileyo kushishino kwaye unedumela elihle phakathi kwabasebenzisi.
I-Sichuan Weilisheng Medical Technology Co, Ltd. ("iSichuan Weilisheng" ngamafutshane), esekwe ngo-2018, lishishini eliphambili eligxile kuphando nakuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yezixhobo zonyango. I-Sichuan Weilisheng yinkxaso-mali ka-Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (ikhowudi yesitokhwe: 300453). Emva kophuhliso lophuhliso lwemizi-mveliso yaseSanxin ukusuka emazantsi kuye emantla, inenye indawo esempuma ukuya entshona yoyilo lobuchule kwimizi-mveliso, exhomekeke kwiChengdu Njengendawo ebalulekileyo ye "Belt and Road" inyathelo, sizibophezele ekubeni ngumqhubi weqonga lokucoca igazi. ezintsha, ubukrelekrele kunye nomgangatho, ukomeleza iimpembelelo zamanye amazwe zeemveliso zesizwe.